Mandray Soso-kevitra 5 Hahita An-tserasera An-trano Ho an'ny Blogging Guest SEO
Mahatsiaro ny fahasahiranam-baovao, ny bilaoginy dia tsy afaka ny hampivelatra ny fahafaha-mividy, na hampihena ny fandikan-dalàna. Azo atao ny manazava ny fahalalahana maneho hevitra an'i Matt Cutts ao amin'ny bilaoginy 2014, momba ny tsy fahampian'ny governemanta bilaogera. Na izany na tsy izany aza, dia nieritreritra izy fa ny tsinam-pamokarana dia tsy ampy ary ny tsy fahampian'ny kalitaon'ny zava-boalaza dia tsy nisy dikany ny nanoratra sy nampiroborobo ny marika ara-tsosialy
Ny manam-pahaizana manokana Semalt Digital Services, Lisa Mitchell, dia manana fomba fiasa mba hampiasaina amin'ny fampiasana bilaogy amin'ny marketing strategy, ho an'ny SEO ho an'ny rohy tsy manana hiccups.
Tokony havaozina ny lisitry ny adiresy
Ny tetikady tsara indrindra ho an'ny SEO amin'ny fampiasana ny fampiasana ny tranonkala dia ny hanomezan-drariny ny fampidirana ireo rohy amin'ny tranonkala iray na zava-dehibe ho an'ny olon-kafa. Ny fampiroboroboana ny hevitry ny hevitra sy ny fanoratana lahatsoratra dia hanana zo ho an'ny mpanjifa toy ny mpitsidika
Tokony hifanaraka amin'ny toetrandro
Ny mpivady dia tokony hanana ny kalitao tsara indrindra, izay manome tombony kokoa ho an'ny olon-kafa. Manana fiantraikany lehibe eo amin'ny fiaraha-monina. Tsy misy afa-tsy ny zava-pisotro misy alikaola, saingy mety misy ny fikaon-dàlana sy ny lazany ho an'ny tranonkala raha toa ka misy mpitsangatsangana. Etsy ankilany, ny mpitsidika rehetra dia ny asa tsara indrindra dia ny manamboatra azy, indrindra raha ilaina mba hampitomboana ny fiaraha-mientana..
Ny tranonkala rehetra tsy mampiasa afa-tsy amin'ny tranonkala
Ireo rohy mankany amin'ireo antony lehibe tokony hanatsarana ny fandraisana anjaran'ilay vahiny. Raha ny tena tanjona dia ny handefa hafatra amin'ny rohy, dia mametraka ny kalitao ao amin'ny adiresy imailaka. Ny fandefasana Guest dia manolotra ireo sary avo lenta ho an'ny rohy sy manaraka. Raha ny marina, dia mitarika ny olona iray ho an'ny vaovao avo lenta ny tsy fahampian'ny zavatra hafa. Afaka manampy azy koa ny manamarina ny fahamendrehana, ary izany dia manam-pahaizana amin'ny sehatr'izy ireo. Ny tenimiafina dia manatsara ny famerenana, ny famoahana ny fanamafisana ny varotra.
Ny mpitsidika dia tokony hifanerasera amin'ny tranonkala hafa ary tsy ny soloanao manokana
Mitoraka blaogy amin'ny bilaogy hafa momba ny zavatra hafa, milaza ny bilaogera manokana fa ianao irery ihany no mipetraka amin'ny rohy, izay tena ilaina mba hanapotika ny finoana ary ny mety tsy ho tafiditra ao amin'ny bilaogy. Ny fifampizaràn'ny hafatra manokana dia tokony ho 2-3 farafahakeliny, fa ny sisa kosa dia mifantoka amin'ny hafa, izay mifandray amin'ny tranonkala, izay misy ny rohy anatiny. Ny lahatsoratra bilaogy lehibe indrindra dia 1,149 eo ho eo teny lang miaraka amin'ny rohy 10
Aza asiana rohy ao amin'ny mpanoratra
Ny rohy momba ny bio mpanoratra dia manam-pahaizana momba ny fametrahana mpitsoa-ponenana amin'ny tranonkala iray. Ity dia manana rohy voafintina izay mahatsiravina ny mpifanandrina dia afaka mamaky ny soritr'aretina. Google dia maneho hatrany ny hasarobidin'ny lahatsoratry ny mpitsidika izay hita ao amin'ny tranokalany
Ny bilaogera dia tsy misy dikany sy mahaliana fa toy ny tetik'asa mahomby. Ny blaogin'ny fanatanjahantena avoakan'ny tranonkala dia miompana amin'ny tranokala iray mitovy amin'ny toerana misy ny tranokala any amin'ny tranokala izay tsy misy na inona na inona mitranga amin'ny sehatr'asa, ny fizahantany ary ny lalao Source .